ntinye ihe eji eme oku na eze maka ulo oru ogwu
Ngwunye ọgwụ na-ekpo ọkụ na ahụike na-etinye ume ọkụ maka usoro ọgwụgwọ na ụlọ ọrụ eze
Ugbo oku A na-ejikarị ya n'ime ụlọ ọrụ ahụike na eze. Ndị na-emepụta ngwa ọrụ ahụike na-erite uru site na teknụzụ kpo oku. Ọ na-enye dị ọcha, nkenke, ugboro ugboro, yana nchekwa gburugburu ebe obibi n'ihi enweghị ọkụ ma ọ bụ nsi na-egbu egbu. A na-eji ya na obere ụlọ nyocha yana nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ nyocha ọgwụ na-eji ọgwụ ọkụ ọkụ eme ihe maka nyocha ọgwụgwọ nanoparticle na electromagnetic hyperthermia. HLQ DW-UHF ntinye akụrụngwa akụrụngwa ezubere iji ngwa a n'uche. A na-eji usoro ikpo ọkụ HLQ eme ihe n'ọtụtụ mahadum na ụlọ ọrụ nyocha gburugburu ụwa.
Kedu ka esi eji kpo oku na Indlọ Ọrụ Ahụike & Eze?
Nanoparticle na hyperthermia ọgwụgwọ na nyocha
Itinye nnu na kpụọ nkedo eze na ahụ ike
Nkwupụta nke catheter iji mepụta atụmatụ nke ndị na-enye ọgwụgwọ
Sdabere na njikọ nke ọgwụ na mmepụta ọgwụ
Okpomọkụ ọgwụgwọ nke alloys nchekwa maka ngwa ahụike
Agịga na nke ịwa ahụ na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ
Ọgwụ ma ọ bụ kpo oku plasma ọbara maka ngwaọrụ IV
Itinye n'ọkwa Heating systems eji ya n'ọtụtụ usoro n'ime ụlọ ọrụ ahụike. Ofdị ntinye ihe ọkụkụ ị ga-ahụ bụ ngwongwo nke catheter na-akpụ, nkedo eze bit brazing, plastic to metal bonding and many more.
Enwere ọtụtụ elele na iji Induction Heating n'ime ụlọ ọrụ Ahụike. The uru bụ nnọọ dị ọcha na-abụghị kọntaktị kpo oku usoro nke bụ ike ịrụ ọrụ nke ọma na nnọọ reputable kpo oku usoro. Ngwunye ọkụ bụ ụzọ dị ngwa ngwa iji kpoo ngwa gị n'ụzọ dị mma. Nke a ga - enyere aka meziwanye mmepụta gị ma melite Ogo.
Ihe ngbakwunye ihe ntinye nwere otutu ihe omuma n'ime ulo oru ogwu na akwado ndi ahia nke oru ohuru ma nyere aka na nkpuchi ohuru maka ihe ohuru. Ngwọta ntinye na-enye aka nyekwara ọtụtụ ụlọ ọrụ na-acha anụnụ anụnụ aka idobe ha ka ha na-arụ ọrụ na-agba ọsọ ma ọ bụ jiri nhicha Induction ọhụrụ na-edochi ya, ma ọ bụ mezie Coul Heating Coils.
Ngwọta n'ichepụta Ngwaọrụ Ahụike na eze
N'ime onodu aku na uba nke uwa ugbua, ndi ulo oru ihe ndi oru ogwu na acho uzo iji kwusi ugwo mmeputa ya ma mekwaa ngwa ngwa. N'otu oge, mma ngwaahịa mma na n'ichepụta agbanwe agbanwe dị ezigbo mkpa; enweghi ike shortzọ mkpirisi mgbe ndụ onye ọdịmma ya nọ na nsogbu.
Ndị nrụpụta ngwaọrụ ọgwụ tụgharịrị gaa na teknụzụ kpo oku nke ọkụ ọkụ iji nyere aka mezuo mmepụta ha, ọnụ ahịa na ebumnuche ha. Ngwunye ọkụ bụ ngwa ngwa, dị ọcha, usoro na-enweghị ịkpọtụrụ nke na-ebute okpomọkụ maka ọtụtụ ụdị ígwè na-esonyere na ngwa ọgwụgwọ na-ekpo ọkụ. E jiri ya tụnyere convection, na-enwu enwu, na-emeghe ọkụ ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ a na-ekpo ọkụ, ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-enye nnukwu uru.
Increbawanye agbanwe agbanwe na njikwa ọnọdụ ọnọdụ ọnọdụ siri ike na sistemụ usoro nlekota emechi
Max arụpụta ihe arụ ọrụ n'ime sel; enweghị oge iri ụra ma ọ bụ ogologo oge jụụ
Mma ka mma site n'iwepu mbupute ngwaahịa, iwepu ma jụ ọnụọgụ
Extended eletrik na ndụ na saịtị-kpọmkwem okpomọkụ na-enweghị kpo oku ọ bụla gbara ya gburugburu akụkụ
Gburugburu ebe obibi na-ada n'enweghị ire ọkụ, anwụrụ ọkụ, ikpo ọkụ, ihe ọkụkụ na-adịghị mma ma ọ bụ oke mkpọtụ
Belata oriri ike na ruo 80% arụmọrụ arụmọrụ arụmọrụ
N'etiti ọtụtụ ngwa nrụpụta ngwaọrụ ahụike maka ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ:
Ntinye ụlọ na-ekpuchi ekpuchi na ebe nchekwa
Na a 20kW ike ọkọnọ, itinye n'ọkwa kpo oku enwere ike iji kpoo tubing nchara ka 2000 Celsius F maka mgbakwunye na ọnụego nke 1.4 sentimita asatọ kwa nkeji.
Brazing Steel Orthodontic Akụkụ
Maka ngwa a, anyị jiri ọnọdụ ikuku iji mee ka ihe nkedo nke akụkụ orthodontic dị na 1300 Celsius F n'ime 1 sekọnd
Ntọala Okpomọkụ Nitinol Medical Subtends
A na-eji ọkụ ọkụ eme ihe iji kpoo stents ọgwụ na mandrel iji tọọ nha kwesịrị ekwesị na nkeji abụọ na 510 Celsius
Brazing Ebe Nkwonkwo Atọ Na Dental Prophy Jet
N'aka nri ntinye nhazi ime oku, enwere ike ịkwado nkwonkwo atọ n'otu oge. Na sekọnd iri, nkwonkwo atọ dị na mgbakọ ezé ezé na-ekpo ọkụ na 1400 Celsius F maka ịme nkwado na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe ma belata oge okirikiri.
Okpomọkụ Staking A threaded Brass Electrical Connector Int A Plastic Shell
Na-agbanwe agbanwe, rụpụtara nsonaazụ na 500 Celsius F na usoro 10 nke okpomọkụ. Ejiri njikọta eletriki ahụ na shei rọba na-enweghị nchapu ma ọ bụ na-achagharị.
Categories Technologies Tags kpo oku ọgwụ, HF na-akwado ọgwụ, itinye n'ọrịa brazing, itinye n'ọgwụ kpo oku, itinye n'ọkwa kpo oku eze, itinye n'ọkwa ọgwụ, induction kpo oku eze, itinye n'ọkwa ụlọ ọgwụ ọgwụ, igwe ikuku oku kpo oku, induction ọgwụ na-ekpo ọkụ, ọgwụ na-ekpo ọkụ ọgwụ Mail igodo